Sheegashooyinka Mareykanka Ee Duqeymaha Ka Dhanka Al Shabaab Oo Noqday Kuwa Aan la aamini Karin. – Shabakadda Amiirnuur
December 29, 2017 3:57 pm by admin Views: 90
Sodonkii maalmood ee lasoo dhaafay dowladda Mareykanka ayaa soo saaraysay warar ku saabsan duqeymo ay ka geysatay deegaanno dhaca Koonfurta dalka Soomaaliya.
Taliska ciidamada Mareykanka qaaradda Afrika ee loo yaqaan AFRICOM ayaa si aan ka fiirsasha laheyn u sheeganaya fulinta weeraro aan jirin arrinkaas oo dad badan shaki gelisay.
Laba Maalmood oo isku xigay Mareykanku waxay sheegeen in weeraro ay ku dileen dagaalyahanno katirsan Al Shabaab ay ka fuliyeen Koonfurta Soomaaliya, weerarada qaar ma sheegin halka ay ka fuliyeen waxayna kusoo gaabsadeen “13 dagalyahan ayaan ku dilnay duqeyn ka dhacday Koonfurta Soomaaliya”.
Sheegasho kale oo ka timid Africom ayay ku sheegeen in gaari ay la socdeen 4 askari Shabaab ah ku burburiyeen deegaanka Xaawa Cabdi oo qiyaastii 22KM ujira Muqdisho ah deegaan ay maamulaan ciidamada AMISOM iyo kuwa Dowladda Federaalka arrinkaas oo dad badan laayaabeen.
Mareykanku horay waxay usheegan jireen duqeymo lagu dilay Hoggaamiyaal katirsan Xarakada Al Shabaab balse hadda sheegashadu waxay gashay marxalad cusub oo qeyb ka ah Borobagaandada dagaalka ee Dowladda Farmaajo horay ugu jirtay.
Sheegashadu xataa kuma eka kaliya duqeymo aan jirin oo Shabaab lala beegsaday balse Mareykanku waxay dhabarka uritaan mas’uuliyadda duqeymo ay ku laayaan dad shacab ah sida wixii ka dhacay Farsooley,Daarusalaam iyo Bariire.
Tan iyo markii uu hoggaanka Mareykanka qabtay Donald Trump ayuu Taliska AFRICOM ku dhaqaaqayay falal gurrucan oo ka dhan ah shacabka Soomaaliyeed balse hadda wuxuu bilaabay in uu u dhaqmo sida wasiirrada DF-ka ee caanka ku ahaa faafinta warar been ah oo ku aaddan guulo aan jirin.